Qaxooti Soomaaliyeed oo maalintii labaad ka sooman cuntada
Buluugleey November 20, 2005
Qaxooti u badan caruur, odayaal iyo haween ayaa maalintii labaad ka sooman cuntada iyagoo ka mudaaharaayaan xaalada dhibaateysan ee ku sugan yihiin tan iyo intii ay u soo hayaameen dalka Yaman. Waxay qaxootigaas soo tubteen xafiisyadda hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay (UNHCR), iyaga oo codsanaya in laga caawiyo xaalada qallafsan ee kala kulmeen xerooyinka qaxootiga dalka Yemen.
Dadkaasi dibadbaxa dhigayey ayaa sheegaya in warqadaha aqoonsiga ee qaxootiga oo ay bixisey hay’adda UNHCR uu waqtigoodii dhacay, teeda kalena aysan helin wax kaalma ah oo waxay ku sugan yihiin xaalad naxdin leh. Waxaa kaloo intaas qaxootigaasi u sii dheer inay jirto cabsi ballaaran oo ah in ay dowladda Yaman xir-xirto oo dabadeedna soo musaafuriso.
Dadkaasi qaxootiga Soomaaliyeed ah ayaa waxay soo gudbiyeen warqad cabasho ah oo ku qorneyd inay haba yaraatee aynan dowlada Yaman siinin wax gargaar ah ama aynan heysanin nolosha asaasiga ah, isla markaasna aynan soo gaarin gargaarka uu ugu talagalay Ururrka Qaramada Midoobey ee u qaabilsan Qaxootiga
Dadka qaxootiga ah ee ku nool dalka Yemen ayaa tiradooda lagu qiyasayaa 50,000 oo ruux kuwaas oo ka soo hayaamay dalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa ilaa haatan ka jirin maamul dhexe ee u adeegi karta dadka soomaaliyeed.